Ọrụ na Jiri
Ihe nkpuchi KN95 nwere nzacha nzacha nke ihe kariri 95% maka irighiri ihe na ihe omimi nke 0.075µm ± 0.02µm. Igwe ikuku aerodynamic nke ikuku bacteria na fungal spores tumadi dịgasị n'etiti 0.7-10 µm, nke dịkwa n'ime nchebe nke N95 masks. Ya mere, enwere ike iji nkpuchi N95 maka nchedo iku ume nke ụfọdụ ihe dị mkpa, dị ka uzuzu sitere n'oge usoro egweri, nhicha na nhazi mineral, ntụ ọka na ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma maka mmiri mmiri ma ọ bụ mmanụ na-abụghị mmanu nke na-abụghị nke e mepụtara site na ịgba. Akụkụ nke gas na-emebi emebi. Ọ nwere ike nyochachaa nke ọma ma sachapụ ísì ọjọọ na-adịghị ahụ (ma e wezụga gas na-egbu egbu), nyere aka belata ọkwa ngosi nke ụfọdụ microbial irighiri anwụ (dịka ebu, anthracis, ụkwara nta, wdg), mana enweghị ike iwepu ọrịa kọntaktị, ọrịa ma ọ bụ ihe egwu ọnwụ nke
Ofdị: Nkpuchi KN95 Maka ndị mmadụ: Ndị ọrụ ahụike ma ọ bụ ndị ọrụ metụtara ya
ọkọlọtọ: GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 Iyo larịị: 99%
Ebe nke mmepụta: Mpaghara Hebei Ahịa:
nlereanya: Dị iko Ofdị nke disinfection:
size: Asambodo Ogo: Nwere
Adị ndụ: Afọ 3 Nhazi ngwá ọrụ: Ọkwa 2
nchekwa ọkọlọtọ: aha ngwaahịa: Nkpuchi KN95
n'ọdụ ụgbọ mmiri: Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai ụzọ nkwụnye ụgwọ: Akwụkwọ ozi akwụmụgwọ ma ọ bụ nyefe waya
Dina nkpuchi ahụ, dọọ aka gị aka wee kpoo ya ihu, jiri akwa akwa imi dị n'elu; isi ihe: kpuchie imi, ọnụ na agba, tinye eriri elu nke nkpuchi ahụ n'isi isi, eriri dị ala n'azụ olu, ma tinye mkpịsị aka gị na mkpịsị aka gị N'oghere imi, gbalịa ime nsọtụ nkpuchi dabara na ihu.
Mgbe ọnọdụ ndị a mere, a ga-edochi ihe nkpuchi na oge:
1. Mgbe iku ume iku ume na-abawanye budata;
2. Mgbe nkpuchi mebiri ma ọ bụ mebie;
3. Mgbe nkpuchi na ihu enweghị ike ijikọchi anya;
5. Ihe nkpuchi emetọla (eji na ngalaba onye ọ bụla ma ọ bụ na ndị ọrịa na-akpakọrịta);
Nke gara aga: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Na ntinye ume)
Osote: KS-9008 Standard CE FFP2 NR (Na Exhalation Valve)
Ce Ffp2 Kn95 Ndị na-azaghachi
Ce Ffp2 Respirator orylọ ọrụ Kn95
Ce Ffp2 Nzaghachi Kn95
China Ce Ffp2 Kn95 Ndị na-azaghachi